Liverpool Oo Iska Lumisay Fursad Ay Kaalinta 4aad Ku Fadhiisan Lahayd & Leeds Oo Waqtigii Dhimashada Dishay Reds - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaLiverpool Oo Iska Lumisay Fursad Ay Kaalinta 4aad Ku Fadhiisan Lahayd & Leeds Oo Waqtigii Dhimashada Dishay Reds
Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa daqiiqadihii ugu dambaysay iska lumisay fursad ay ku geli lahayd kaalinta afraad ee horyaalka Premier League, waxaana barbarro 1-1 ah ku qabatay Leeds United oo dhamaadkii la timid goolka barbarraha.
Reds ayaa u baahnayd in ay hesho saddexda dhibcood ee ciyaartan, si ay ula simanto West Ham United oo afraad ku jirta, taas oo ay ku dhaafaysay farqiga goolasha.
Tababare Jurgen Klopp oo ciyaartan kaydka dhigay Mohamed Salah ayaa qaybtii hore ku bilaabatay si xooggan, waxaana gool u dhaliyey Sadio Mane oo kubbad goolka oo bannaan uu Trent Alexander-Arnold u dhigay ku leexiyey shabaqa.
Fursado qaali ah oo kale ayay Liverpool heshay qaybtii hore, waxayse iska lumiyeen iyadoo Georginio Wijnaldum uu kala lexejeclooday Mane kubbad ay u badnayd in ay shabaqa taabato haddii uu u dhiibi lahaa.
Leeds United ayaa qaybtii dambe si xooggan gacanta ugu dhigtay maamulka ciyaarta, waxaanay heleen kubbado badan oo ay goolal u beddeli karayeen.
Tababare Klopp oo ciyaarta oo labaatankii daqiiqadood ee ugu dambeeyey Sadio Mane oo uu ku beddelay Mohamed Salah iyo Diogo Jota oo uu ka daba-geeyey oo uu kusoo beddelay Diogo Jota ayaa la moodayey in ay saamayn ku yeesheen kooxda.
Leeds United ayaa daqiiqaddii 87aad heshay goolka barbarraha oo uu u dhaliyey laacibka Diego Llorente oo madax ku qabtay kubbad uu usoo dhiibay Jack Harrison.
Kooxda garoonkeeda lagu ciyaarayay oo dhab ahaan u qalmaysay in ciyaartan ay hal dhibic ka hesho ayaa muujisay ciyaar tayadeedu sarrayso.
Liverpool ayaa daqiiqadihii ugu dambeeyey samaysay dardar, waxaase mar walba ay halis ugu jireen in kubaddu tagto goolkooda maadaama Leeds ay ciyaaraysay kubbad kalsooni badan oo aanay wax badan iskaga tirinayn Reds.
Kaddib natiijada ciyaartan, Liverpool ayaa yeelatay 53 dhibcood, waxaanay laba dhibcood ka dambaysaa West Ham oo afraad fadhida oo 55 dhibcood leh, halka Chelsea ay shanaad ku jirto oo ay leedahay 54 dhibcood.
Ka hor intii aanay ciyaartani bilaabmin, taageereyaal cadhaysan ayaa waddada u galay baska kooxda Liverpool oo ay ciyaartoyduna saaran yihiin, waxaanay isku dayeen in ay joojiyaan oo ay u diidaan in garoonka ay gaadhaan.
Taageereyaasha ayaa ka cadhaysnaa tartanka cusub ee Super League ee kooxaha waaweyn ee Yurub ay samaysanayaan.